Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခကြောင့် အေးချမ်းစွာ ပညာ မသင်နိုင်သေး
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခကြောင့် အေးချမ်းစွာ ပညာ မသင်နိုင်သေး
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခအပြီး စစ်တွေမြို့ မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ – ခင်သြ / ဧရာဝတီ)
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ပြင်ရှိ နည်းပညာကျောင်းမှ ပြန်လာသည့် ကျောင်းသားများကို ယနေ့ နေ့လယ်တွင် ဘင်္ဂါလီ ရွာသားတချို့က အနှောင့်အယှက် ပေးသောကြောင့် တာဝန်ရှိသူများက ကျောင်းသားများ ကျောင်းပြင်မထွက်ရန် သတိပေးထားပြီး လုံခြုံရေး အကာအကွယ် ယူ၍ ကျောင်းသားများအား အိမ်ပြန်ပို့ပေးရန် စီစဉ်နေရကြောင်း သိရသည်။
“ကျနော့်သားက ကျောင်းကနေ ဆက်သွယ်တယ်။ ဘင်္ဂါလီ ရွာသားတွေက ကျောင်းက ပြန်လာတဲ့သူတွေကို ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ လိုက်နှောင့်ယှက်လို့ ကျောင်းအုပ်ကြီးက ကလေးတွေကို ကျောင်းပြင်မထွက်ခိုင်း တော့ဘူး။ လုံခြုံရေးကို အကြောင်းကြား ထားတယ်။ လုံခြုံရေးတွေ လာမှ အိမ်ပြန်ပို့ပေးမယ် ပြောတယ်” ဟု နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား မိဘတဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
နည်းပညာ တက္ကသိုလ်သည် စစ်တွေမြို့နှင့် ၈ မိုင်ခန့်တွင် တည်ရှိကြောင်း၊ ကျောင်းသွားရာ လမ်းတလျှောက်၌ ဘင်္ဂါ လီ ကျေးရွာတချို့ကို ဖြတ်သွားရကြောင်း၊ မိဘအများစုသည် လုံခြုံရေး စိတ်မချ သည့်အတွက် သားသမီးများကို ကျောင်း ပြန်မတက် ခိုင်းသေးသည့်အတွက် ကျောင်းသား အနည်းငယ်သာ ရှိကြောင်း သိရသည်။
နည်းပညာကျောင်းအား ယမန်နေ့က စတင်ဖွင့်လှစ်ထားပြီး စစ်တွေမြို့ပေါ်မှ ကျောင်းသားများ တက်ရောက်နေ ကြကြောင်း၊ ကျောင်းကားများ၌ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် တချို့လိုက်ပါပေးသည်ကို တွေ့ရကြောင်း ပန်းပျိုးလတ် ဘော်ဒါဆောင် ပိုင်ရှင်နှင့် ကျောင်းသား မိဘတဦး ဖြစ်သူ ဦးအောင်ကျော်ညွန့်က ပြောသည်။
“ဘော်ဒါဆောင်မှာတော့ ကျောင်းသားတွေ တ၀က်လောက်ပဲ ရှိတော့တယ်၊ မိဘတွေ ကလည်းပဲ စိုးရိမ်နေကြ တုန်းပဲ၊ မနေ့ကတော့ ကျောင်းကားတိုင်းမှာ စစ်သား တယောက်၊ နှစ်ယောက် လိုက်ပြီး လုံခြုံရေး ယူပေးတာတွေ့ရတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ တက္ကသိုလ်ကျောင်း တချို့ စတင်ဖွင့်နေပြီ ဖြစ်သော်လည်း လုံခြုံရေး အခြေအနေကြောင့် တက်ရောက်သူ နည်းပါးသေးကြောင်း သိရသည်။
စစ်တွေတက္ကသိုလ်မှ အပ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်၊ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်၊ အဝေးသင် တက္ကသိုလ် စသည့် ကျောင်းတချို့ကို ယမန်နေ့က ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
တက္ကသိုလ် ကျောင်းများတွင် လုံခြုံရေး အစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက် ပေးထားကြောင်း၊ စစ်တွေ တက္ကသိုလ်ကိုလည်း မကြာမီ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း ရခိုင်ဒေသတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများနှင့် ပတ်သက်၍ ဖွဲ့စည်းထားသော ပြန်ကြားရေး အဖွဲ့ တာဝန်ခံ ဦးဝင်းမြိုင်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
“စစ်တွေတက္ကသိုလ်က ဘင်္ဂါလီရွာတွေနဲ့ နီးတဲ့အတွက် တချို့က လုံခြုံရေး စိတ်မချ သေးတာရယ်၊ ကျောင်းသားတွေက လည်းပဲ ကိုယ့်ဒေသတွေကို ပြန်သွားကြတာ ရယ်ကြောင့်ပါ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
စစ်တွေမြို့နှင့် ရခိုင်ဒေသတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် စစ်တွေ၊ သံတွဲဒေသ တို့ရှိ တက္ကသိုလ်များကို ဇွန်လ ဆန်းမှ စတင်၍ ပိတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ နေရပ် အသီးသီးသို့ ပြန်သွားသည့် ကျောင်းသားများနှင့် မိဘများထံ တာဝန်ရှိသူများ က အကြောင်းကြားထား ကြောင်းလည်း ဦးဝင်းမြိုင်က ပြောသည်။
တက္ကသိုလ်များ၌ တက်ရောက်နေသည့် ကျောင်းသားများမှာ ဒေသခံတိုင်းရင်းသား ကျောင်းသားများသာ ရှိပြီး ဘင်္ဂါလီ ကျောင်းသား မရှိကြောင်း စစ်တွေမြို့ခံ ကိုညီညီက ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ အခြေခံ ပညာကျောင်းများ အားလုံး၌ အေးချမ်းစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရေး၊ ကျောင်း
သားများ၏ လုံခြုံရေး၊ ဆရာ၊ ဆရာမ များ၏ လုံခြုံရေး ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် အစိုးရ အာဏာပိုင်တို့က တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်
ပေးနိုင်ရေး အတွက် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ (RNDP) လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက အစိုးရထံ တင်ပြ ထားကြောင်း သိရသည်။
စစ်တွေမြို့ပေါ် နှင့် ဒေသ တ၀ိုက်ရှိ အခြေခံပညာ ကျောင်းများ အားလုံးနီးပါးကို ဖွင့်လှစ်ထားပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် မိဘ တချို့က ၎င်းတို့ သားသမီးများကို စိတ်မချသည့် အတွက် ကျောင်းသို့ ပို့ဆောင်ခြင်း မရှိကြောင်းလည်း ဦးဝင်းမြိုင်က ပြော သည်။ အကြမ်းဖက်မှု စတင်ခဲ့သည့် မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင် မြို့တို့တွင်မူ ကျောင်းများအားလုံး ပိတ်ထားဆဲ ဖြစ်သည်။
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခကြောင့် အေးချမ်းစွာ ပညာ မသင်နိုင်သေး . All Rights Reserved